Itekhnoloji - Shandong Lanbeisite Iqela lezixhobo zemfundo Co, Ltd.
Yeyiphi itekhnoloji yokuBhala yokuBhala ye-LONBEST LCD Blackboard?
Iscreen sokubhala siqulathe ezintathu, ungqameko oluphezulu luyifilimu ebonakalayo ye-PET ene-ITO kwicala elinye, ungqengqelo oluphakathi luyindawo edibeneyo nolwelo lwekristale, kwaye ungqameko olungezantsi luyifilimu emnyama engabonakaliyo emnyama ene-ITO engqongekayo icala. Ii-monomers ezinokunyibilika ezichithwe kwinkqubo yekristale engamanzi zinokudityaniswa ngokukhawuleza kuthungelwano lwepolymer kwaye inkqubo yekristale engamanzi inokwenza ubume besizinda esininzi ngemitha edityanisiweyo yokukhanya kwelanga kunye nokukhanya kwe-infrared ngexesha elithile kunye nokuqina. Iscreen sokubhala senza ikristalu engamanzi yenze ulungelelwaniso lweplanethi ngochuku lokucinezela ukubonisa ukubhala kunye nokuguqula ibe yimbonakalo yembobo yombane kusetyenziswa umbane osetyenzisiweyo, emva koko kujike kube kukujolisa ekucaciseni ukubhalwa esibukweni.
Kutheni siqulunqa ibhodi emnyama ye-LCD? Zithini izibonelelo zokuphelisa abasebenzisi?
Iibhodi ezimnyama zemveli ezisekwe kubhalo lwekwayala zivelisa uthuli oluninzi kwinkqubo yokubhala kunye nokusula, okubeka emngciphekweni impilo yabafundisi-ntsapho nakubafundi. Ukubhala ebhodini emhlophe kuthatha iipensile ezininzi zokuphawula ukuphuma kwevumba elirhabaxayo. Ukujonga kwizixhobo zomboniso we-elektroniki (ipaneli ethe tyaba, ipaneli yokuchukumisa yeLCD, ibhodi emhlophe emhlophe, njl.njl.) Ixesha elide kuya kudala ukudinwa okubonakalayo kwaye konakalise nokubona kwabafundi. I-LONBEST Ibhodi yokubhala ye-LCD isombulule ngokugqibeleleyo ingxaki yongcoliseko lothuli. Ungabhala ngazo naziphi na izinto ezinzima ebhodini, kwaneenzipho zethu.
Umgaqo wokubonisa webhodi yokubhala ye-E usekwe kukukhanya kwangaphandle, akukho radiation ye-electromagnetic; Amehlo awadinwa, akukho nto ikruqulayo kwaphela. Amanqaku okubhala ebhodini abonakala kumgama ongama-30 eemitha ngenxa yomyinge wobukhulu obuphakamileyo. I-angle ebonakalayo ebanzi ebanzi yenza kucace ukuba ubone kuyo nayiphi na ikona yegumbi. Elinye iqhosha lokususa lithatha indawo yokusula ngesandla ukugcina ixesha. Ngaphandle koko, ukucima inxenye kuyafumaneka. Inqaku ngalinye ebhodini linokucinywa amaxesha ngamaxesha. Ngokugcina kwangoko kunye nokusasaza okuhambisanayo, ukubhala kungazenzekelayo kwaye kugcinwe kwizixhobo ezinjengeefowuni eziphathwayo, iilaptops, ukubonelela ngamanqaku afanelekileyo e-elektroniki ukujonga nanini na naphi na.
Silulawula njani umgangatho wemveliso？
Indawo yemveliso engenaluthuli
Uvavanyo lobulukhuni befilimu eluhlaza
Uvavanyo lokumelana nephepha kwimathiriyeli yefilimu eluhlaza
Uvavanyo lobungqina bokunyibilika kwemveliso eyenziweyo
Uvavanyo olunzulu lwendalo
Uvavanyo lokuxhathisa uvavanyo lomgangatho webhodi
Uvavanyo lokulinganisa ukuhamba kwezothutho
Zeziphi amalungelo awodwa omenzi wechiza esinalo kwibhodi yeLCD?
Amalungelo awodwa omenzi wechiza elizwe jikelele asetyenziswa: 52 kunye neLungelo elilodwa lomenzi eliphunyeziweyo: 23
Inombolo yelungelo elilodwa lomenzi
IFILIMU YOKUBHALA ULAWULO LWAMANZI, INDLELA YOKWENZA, ISETYHULA SOKUPHUMA KWEZIPHUMO EZININZI NENKQUBO YOKWENZA INKONZO
【発 明 の 名称】 部分 消去 可能 可能 液晶 液晶 ム ム ム ム ム ム ム
【발명 의 명칭】 부분 삭제 가 가능 액정 액정 라 팅 부분 부분 부분 부분 시스템 시스템
Umbutho wamalungelo obunikazi waseYurophu （EPO PO
IBhunga leNtsebenziswano kwiGulf (GCC)
Amalungelo awodwa omenzi wechiza afakwa kumazwe angama-53
ECanada, eUnited States, eJapan, eMzantsi Korea, e-Australia.
I-European Patents Organisation （EPO）: IAlbania, iOstriya, iBelgium, iBulgaria, iCroatia, iCyprus, iRiphabhlikhi yaseCzech, iDenmark, iEstonia, iFrance, iJamani, iGrisi, iHungary, iIreland, i-Itali, i-Itali, iLatvia, iLiechtenstein, iLithuania, iLuxembourg. , IMalta, iMonaco, i-Yugoslav Republic yaseMacedonia, iNetherlands, iNorway, iPoland, iPortugal, iRomania, iSan Marino, iSerbia, iSlovakia, iSlovenia, iSpain, iSweden, iSwitzerland, iTurkey, i-UK, iBosnia neHerzegovina, iMontenegro, iMorocco, IRiphabhlikhi yaseMoldova.
I-Switzerland kunye ne-Liechtenstein.
I-Gulf Cooperation Council (GCC): I-United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia.